मोदीको ट्वीट : सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास ! « Nepal Bahas
मोदीको ट्वीट : सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास !
मोदी विजयको सन्निकट पुगेपछि
प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १५:१९
काठमाडौं । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिए संगै भारतीय प्रधानमन्त्रीले पनि विजयको सन्निकट नजिक पुगेको घोषणा गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री मोदीले ट्वीट गर्दै सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास विजयी भारत भनेर लेखेका छन् ।
लोकसभा सीट ५४३ भन्दा ५४२ मतदान पछि मतदानको परिणाम आज भइरहेको छ। मतगणना जारी रहदा राहुल गांधी अमेथी सीटका विरुद्ध कडा संघर्ष गर्दै छन्। त्यहाँ स्मृत्ति ईरानीले उनलाई पछाइरहेकी छिन् ।
मतगणनाको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा आफ्नो पाटीले जित्ने पक्का भएको भन्दै खुशि व्यक्त गरेका छन् । विजयी हुनु पूर्व नै प्रधानमन्त्री मोदीले सबैलाई धन्यवाद दिदै फेरि पनि आफ्नो सरकार बन्ने कुरामा सबैले विश्वास गरेर मतदान गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
अहिले भारतमा सम्पन्न लोक–सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ । साँझसम्म सबै परिणाम आइसक्ने सम्भावना छ ।सुरुवाती मतगणनाका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीले सहजै बहुमत हासिल गर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै भाजपा नेतृत्वको ‘एनडीए’ गठबन्धनले सहजै ३०० भन्दा बढी सिट ल्याउने देखिएको छ । सुरुवाती मतगणना परिणाम निर्वाचन लगतै जारी गरिएको मत सर्वेक्षण अनुरुप नै देखिन्छ ।
त्यस्तै तमिल नाडुमा डीएमकेसँगको कांग्रेस गठबन्धन उपयोगी सावित भएको छ । त्यस गठबन्धनले ३८ मध्य ३४ सिटमा अग्रता हासिल गरेको छ । भाजपाको गठबन्धन जम्मा ४ सिटमा अघि छ । तर दक्षिणी राज्यमै पनि करनाटकमा भने भाजपाले राम्रो मत हासिल गरेको छ । त्यहाँको कुल २८ सिटमा २४ स्थानमा भाजपा अघि छ ।
समग्रमा भाजपा एक्लै २७४ सिटमा अगाडि छ भने उसको नेतृत्वमा रहेको एनडीए गठबन्धन ३२२ स्थानमा अगाडि छ । यो भारतमा सरकार बनाउन आवश्यक २७२ सिटभन्दा सजहै धेरै हो । अन्तिम परिणाम उल्लेखित अग्रताको थोरै कम–बेसी आउने सम्भावना छ ।